Fandrobana volabe 36 tapitrisa Ar teny Anosipatrana: 2 lahy nidoboka eny Tsiafahy, vehivavy tera-bao nalefa eny Antanimora | NewsMada
Par Taratra sur 13/08/2020
Roa lahy nidoboka eny Tsiafahy. Anisan’izany ilay voalaza fa polisy voaroaka, tsy am-perinasa intsony, sy ny namany. Manampy ireo, naiditra am-ponja eny Antanimora ny vehivavy iray vao tera-bao. Momba ilay “Raharaha fandrobana volabe 36 tapitrisa Ar”, teny Anosipatrana no nahavoarohirohy azy ireo.
Niakatra teo anatrehan’ny mpitsara mpanao famotorana, ny alatsinainy teo tetsyAnosy ity asan-jiolahy ny herinandro lasa teo ity. Olona telo no voarohirohy tsy afa-bela tamin’izany, ary efa samy nidoboka am-ponja, ny harivan’io ihany. Anisan’izany ny vehivavy iray, 36 taona vao tera-bao, naiditra eny Antanimora. Mpiray tsikombakomba no sady mpamatsy fitaovam-piadina ireo jiolahy nanao ilay “opération” izy io. Fantatra fa efa voatana any am-ponja noho ny famatsiana fitaovam-piadiana (basy) amin’ny jiolahy koa ny vadin’izy io.
Efa nandrasan’ny polisy tao an-tranony, eny Itaosy, ity renim-pianakaviana ity ka noraisim-potsiny tamin’ny fiverenany tao an-tranony, avy nitondra an-janany nanao vaksiny.
Vola an-tapitrisany tao anaty kitapo
Ilay polisy tsy am-perinasa sy ny namany kosa, efa voasambotry ny polisy ny ny harivan’ilay fanafihana ihany. Tratra niaraka tamin’izy ireo tamin’izany ny fiara marika Peugeot 309 sy ireo vola antapitrisany maro tao anaty kitapo, niampy basy poleta efa nifahana bala miisa enina.
Tsiahivina fa zandary sy lehilahy iray samy nanao fanamiana polisy no nanao ity fanafihana teny Anosipatrana ity. Maty voatifitry ny polisy teny akaikin’ny fasan’ny karana ilay zandary, taorian’ny fifanenjehana tamin’ny polisy. Ny harivan’iny ihany koa no nahasamborana ilay polisy efa voaroaka sy ireo namany roalahy, nandray anjara mivantanba tamin’ity fandrobana sy fanafihana goavana ity.